नोटबुक - नेपाल
ट्याग ' नोटबुक'
कलेन्द्र सेजुवाल, श्रावण ७, २०७६
सेवाग्राहीको भीडभाड हुने सार्वजनिक स्थलमा धूमपान र मद्यपान मात्र होइन, पानपराग, गुट्खाजस्ता वस्तुको प्रयोग निषेध कहिले गर्ने ? कसले गर्ने ?
गोकुल अर्याल, असार २४, २०७६
सत्ता वा प्रतिपक्ष, जुनसुकै नेतालाई पनि उखान टुक्काले प्रहार गर्ने खुबीका जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग केही घन्टा बसजम गर्ने अवसर जुटेको थियो । जापान बस्ने सालो भाइलाई गाउँबाट पठाइदिएको साढे दुई माना घिउ कोसेली पुर्‍याउन म केसी बस्ने मैतीदेवी घर पुगेँ ।
Tags: ब्लग नोटबुक
रविन्द्र मानन्धर, असार १७, २०७६
‘जोरका झट्का धीरेसे लगे’ भनेझैँ विमानभित्र परिचारिकाले उद्घोष गरेको ३० डिग्री तापक्रम सहर पस्दा ४२ डिग्रीमा उकालो लागिसकेछ । टाउकोमा कसैले हेयर ड्रायर चलाइरहेको भान हुन्थ्यो । कोलकातावासी पंखा र एसीकै भरमा बाँच्ने रहेछन् ।
जनक नेपाल, असार ११, २०७६
एक दशकमै आफ्नो रुप–रंग फेरेछ, जनकपुरले । हरेक साँझ गंगासागरमा आरती उतारिन्छ । सहरका ठूला र भित्री सडक फराकिला र कालोपत्रे हुँदैछन् । ती सबै संघीयताअघिकै योजना हुन् ।
हरि गौतम, असार ४, २०७६
रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाको वडा–१, २ र ३ मा केही स्वास्थ्य स्वयंसेविका अलग देखिए ।